လကျစတာ 3:1 ယူနိုကျတကျ FA ကှာတားဖိုငျနယျပှဲအပွီး ပွောစမှတျဖွဈစရာ ၇ ခကျြ – Sports A2Z
လကျစတာအတှကျ FA ဖလားကို အားစိုကျဖို့ အခြိနျပိုရခဲ့တယျ။ တပတျတိတိအားမှေးထားခြိနျရလို့ အရငျတပတျပှဲစဉျက အမာခံလူစာရငျးအတိုငျး တောငျ့တောငျ့တငျးတငျး ပှဲထှကျနိုငျခဲ့တယျ။ မကျဒီဆနျ ဒဏျရာရလို့ အနားယူခဲ့ရတာ တခကျြသာ ပွောစရာရှိတယျ။ ယူနိုကျတကျမှာတော့ လူစာရငျး အပွောငျးအလဲက ၅ ဦးအထိ ပွုလုပျခဲ့တာကို တှရေ့တယျ။ ကွားရကျက အစေီမီလနျနဲ့လူစာရငျးကို အမာခံအတိုငျး ဆကျလကျ ပှဲမထုတျနိုငျဘဲ အဓိက ကစားသမားတှကေို အနားပေးပွီး ဗနျဒဘိချ၊ ပေါ့ဘာတို့နဲ့ ပှဲထှကျလာသလို အရနျခုံစာရငျး ကတော့ ဘရူနို၊ ကာဗာနီ၊ လုချရှော၊ မကျတျောမီနေးတို့နဲ့ တောငျ့တငျးနခေဲ့တယျ။
လကျစတာမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ အီယနျနာခြို
လကျစတာက အသငျးရဲ့ အဓိက ကစားသမားတှေ ဒဏျရာရခဲ့တဲ့နောကျပိုငျး ပထမပှဲထှကျစာရငျးကို အပွောငျးအလဲတှလေုပျပွီး ခဉျြးကပျရတဲ့နောကျ ကစားကှကျကလညျး အပွောငျးအလဲလုပျပွီး နညျးလမျးတခြို့ ဆနျးသဈလာရတယျ။ ရော့ဂြားဈက သူ့အသငျးကို နောကျခံလူ ၃ ဦးအထိုငျနဲ့ ကစားကှကျပုံစံကို ပွောငျးလဲ ကစားစပွေီး တိုကျစဈမှာ တလှညျ့စီ ကစားနကေဖြွဈတဲ့ ဗာဒီနဲ့ အီယနျနာခြိုက ပုံမှနျတိုကျစဈ အတှဲအဖကျဖွဈလာတယျ။
ဗာဒီက ဂိုးသှငျးခွကေနြခြေိနျမှာ အီယနျနာခြိုက ရော့ဂြားဈအားကိုရလောကျအောငျ ခွစှေမျးပွလာတယျ။ ဒီနမှေ့ာ လကျစတာရဲ့ အဖှငျ့ဂိုးနဲ့ ပှဲသိမျးဂိုးကို သှငျးယူခဲ့သလို တိုငျလီမနျးဈရဲ့ ဒုတိယ ဦးဆောငျဂိုးကိုလညျး သူ့ရဲ့လှုပျရှားမှုကတဆငျ့ ဖနျတီးပေးသှားခဲ့တာဖွဈတယျ။ သူက နောကျဆုံး ၄ ပှဲမှာ ၇ ဂိုး အထိ သှငျးယူလာတဲ့အထိ ခွစှေမျးတောကျပခဲ့ပွီး ဗာဒီ အီယနျနာခြိုအတှဲက အလုပျဖွဈလာတယျဆိုရပါမယျ။
ယူနိုကျတကျရဲ့ ခံစဈကစားပုံ မသဝေပျမှုက အသငျးအတှကျ နညျးပွဘဝ ပထမဆုံးဆုဖလားအောငျမွငျမှုကို ရှာဖှနေတေဲ့ ဆိုးလျရှားရဲ့သတှေငျးလို့ ဆိုရမယျ။ ခံစဈအမှားတှကေနတေဆငျ့ ဂိုးတှအေလှူလိုပေးနရေတာ ပွဿနာပါ။ ဒီနပှေဲ့မှာ လကျစတာရဲ့ပထမဂိုးအတှကျ လုံးလုံးလြားလြားအပွဈရှိသူက ဖရကျဒျဖွဈတယျ။ အီယနျနာခြိုရဲ့ ပှဲသိမျးဂိုးမှာလညျး ယူနိုကျတကျခံစဈအစုအဖှဲ့တခုလုံးရဲ့ မတညျငွိမျမှုအပွဈဖွဈတယျ။ ဒါကပြော့ကှကျစဈစဈဖွဈနပေါတယျ။ တိုငျလီမနျးဈရဲ့ သှငျးဂိုးကိုကွညျ့ရငျ ကှငျးလယျခံစဈပိုငျးရော၊ ခံစဈကွောငျးကပါ သူ့ကိုဖိအားပေးမယျ့သူမရှိဘဲ လှတျလှတျလပျလပျ ကနျသှငျးခှငျ့ပွုခဲ့တာကို မွငျရတယျ။ ဒီလိုခံယူခကျြက ယူနိုကျတကျရဲ့ သကှေငျးသကှေကျပဲလို့ အတပျပွောရမှာပါ။
ဆုဖလားအောငျမွငျမှုကို နမျးရှိုကျခငျြတဲ့ နညျးပွနှဈဦးရဲ့သတျပှဲ
ယူနိုကျတကျ နဲ့ လကျစတာအသငျးကို အခြိနျတူနီးပါးအတှငျးမှာ တာဝနျယူခဲ့တဲ့ ဆိုးလျရှားနဲ့ ရော့ဂြားဈတို့ရဲ့ ဒီနသေ့တျပှဲဟာ အသငျးနညျးပွဘဝမှာ ပထမဆုံးအနနေဲ့ ဆုဖလားအောငျမွငျမှုကို ရှာဖှနေမျးရှိုကျခငျြခဲ့တာခငျြးလညျး တူညီနပေါတယျ။ FA ဖလားကို နှဈဦးစလုံးက ရညျမှနျးထားကွတယျ။ ရညျမှနျးထားတဲ့အတိုငျး လုပျဆောငျနိုငျသူက ဆိုးလျရှားကို ဖွုတျခခြဲ့တဲ့ ရော့ဂြားဈဖွဈလာတယျ။ FA ဆီမီးအဆငျ့ကို တကျရောကျနိုငျခဲ့ပွီး စိနျ့အသငျးနဲ့ တှဆေုံ့ရပါမယျ။ ဆိုးလျရှားကတော့ ယူရိုပါလိဂျကို ပွနျလညျအာရုံစိုကျရတော့မှာပါ။
အဝေးကှငျးရှုံးပှဲမရှိစံခြိနျကို စတေးလိုကျရတဲ့ ယူနိုကျတကျ
ယူနိုကျတကျရဲ့ နောကျဆုံး အဝေးကှငျးရှုံးပှဲက လှနျခဲ့တဲ့တနှဈက လီဗာပူးလျကို အနျဖီးလျမှာ ၂ ဂိုးပွတျနဲ့ အရေးနိမျခဲ့တာဖွဈတယျ။ ဒီနောကျမှာတော့ ၂၉ ပှဲဆကျ အဝေးကှငျး ရှုံးပှဲမရှိ စံခြိနျယူထားတဲ့ ယူနိုကျတကျရဲ့ အဝေးကှငျးမှတျတမျးကောငျးက လကျစတာရဲ့ အဆုံးသတျခွငျးကို ခံလိုကျရတယျ။ လကျစတာအသငျးကလညျး ထိုကျတနျတဲ့နိုငျပှဲကို ရယူသှားခဲ့တာကို တှရေ့တယျ။
နံပါတျ ၁ ဂိုးသမားနရောနဲ့ ဟနျဒါဆနျထိုကျတနျရဲ့လား?
ဟနျဒါဆနျလား? ဒဟဲယား? ဒါက ဒီရကျပိုငျးအတှငျး အတျောလေးဆူညံလာတဲ့ အငွငျးပှားမှုပါ။ ဟနျဒါဆနျက ပရီးမီးယားလိဂျမှာတော့ မနျစီးတီး ဝကျဈဟမျးတို့ကို ဂိုးမပေးခဲ့ရဘဲ Clean Sheet ယူနိငျခဲ့တယျ။ အစေီမီလနျနဲ့ ပအကြော့မှာတော့ လကျစှမျးပကျြနခေဲ့တာမွငျရတယျ။ အမှားအယှငျးပွုလုပျခဲ့တယျ။
အစေီမီလနျနဲ့ ဒုအကြော့မှာ လကျစှမျးပွခဲ့လို့ ဟနျဒါဆနျတယောကျ ပွနျလညျတညျငွိမျပွီလို့ ယူဆနကွေခြိနျမှာ ဒီနပှေဲ့ရဲ့ အားနညျးတဲ့ လကျစှမျးတှကေို ထပျမံမွငျတှခေဲ့ရတယျ။ သူ့အပျေါမှာ လှနျလှနျကြူးကြူးဝဖေနျတာမြိုးတှတေော့ မရှိသေးပမေယျ့ ယူနိုကျတကျဂိုးပေါကျကို ကာကှယျဖို့ လုံလောကျတဲ့ရငျ့ကကျြမှု၊ တညျငွိမျမှု မရှိသေးဘူးလို့ မှတျခကျြခနြကွေပါပွီ။
ယူနိုကျတကျခပြေဂိုးမှာ ဗနျဒဘိချရဲ့အရညျအသှေးကို မွငျခဲ့ရ
ဂရငျးဝုဒျရဲ့ ခပြေဂိုးမှာ ယူနိုကျတကျက ပထမပိုငျးအတှငျး အသကျရှုခြောငျသှားခဲ့ရပွီး ဒီဂိုးမှာ ဗနျဒဘိချရဲ့ နညျးစနဈပိုငျးအရညျအသှေးကို ထငျထငျရှားရှား မွငျတှခေဲ့ရတာက သူနဲ့ယူနိုကျတကျအနာဂတျမှာ အပေါငျးလက်ခဏာဆောငျခဲ့တာပါ။ သူက ဂရငျးဝုဒျကနျသှငျးရလှယျကူအောငျ နရောလှတျကို ဖနျတီးပေးသှားခဲ့တယျ။ သူ့ရှလြေ့ားမှုက လှပခဲ့တယျ။
လက်စတာအတွက် FA ဖလားကို အားစိုက်ဖို့ အချိန်ပိုရခဲ့တယ်။ တပတ်တိတိအားမွေးထားချိန်ရလို့ အရင်တပတ်ပွဲစဉ်က အမာခံလူစာရင်းအတိုင်း တောင့်တောင့်တင်းတင်း ပွဲထွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ မက်ဒီဆန် ဒဏ်ရာရလို့ အနားယူခဲ့ရတာ တချက်သာ ပြောစရာရှိတယ်။ ယူနိုက်တက်မှာတော့ လူစာရင်း အပြောင်းအလဲက ၅ ဦးအထိ ပြုလုပ်ခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်။ ကြားရက်က အေစီမီလန်နဲ့လူစာရင်းကို အမာခံအတိုင်း ဆက်လက် ပွဲမထုတ်နိုင်ဘဲ အဓိက ကစားသမားတွေကို အနားပေးပြီး ဗန်ဒဘိခ်၊ ပေါ့ဘာတို့နဲ့ ပွဲထွက်လာသလို အရန်ခုံစာရင်း ကတော့ ဘရူနို၊ ကာဗာနီ၊ လုခ်ရှော၊ မက်တော်မီနေးတို့နဲ့ တောင့်တင်းနေခဲ့တယ်။
လက်စတာမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အီယန်နာချို
လက်စတာက အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမားတွေ ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း ပထမပွဲထွက်စာရင်းကို အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ပြီး ချဉ်းကပ်ရတဲ့နောက် ကစားကွက်ကလည်း အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီး နည်းလမ်းတချို့ ဆန်းသစ်လာရတယ်။ ရော့ဂျားစ်က သူ့အသင်းကို နောက်ခံလူ ၃ ဦးအထိုင်နဲ့ ကစားကွက်ပုံစံကို ပြောင်းလဲ ကစားစေပြီး တိုက်စစ်မှာ တလှည့်စီ ကစားနေကျဖြစ်တဲ့ ဗာဒီနဲ့ အီယန်နာချိုက ပုံမှန်တိုက်စစ် အတွဲအဖက်ဖြစ်လာတယ်။
ဗာဒီက ဂိုးသွင်းခြေကျနေချိန်မှာ အီယန်နာချိုက ရော့ဂျားစ်အားကိုရလောက်အောင် ခြေစွမ်းပြလာတယ်။ ဒီနေ့မှာ လက်စတာရဲ့ အဖွင့်ဂိုးနဲ့ ပွဲသိမ်းဂိုးကို သွင်းယူခဲ့သလို တိုင်လီမန်းစ်ရဲ့ ဒုတိယ ဦးဆောင်ဂိုးကိုလည်း သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကတဆင့် ဖန်တီးပေးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ သူက နောက်ဆုံး ၄ ပွဲမှာ ၇ ဂိုး အထိ သွင်းယူလာတဲ့အထိ ခြေစွမ်းတောက်ပခဲ့ပြီး ဗာဒီ အီယန်နာချိုအတွဲက အလုပ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရပါမယ်။
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ခံစစ်ကစားပုံ မသေဝပ်မှုက အသင်းအတွက် နည်းပြဘဝ ပထမဆုံးဆုဖလားအောင်မြင်မှုကို ရှာဖွေနေတဲ့ ဆိုးလ်ရှားရဲ့သေတွင်းလို့ ဆိုရမယ်။ ခံစစ်အမှားတွေကနေတဆင့် ဂိုးတွေအလှူလိုပေးနေရတာ ပြဿနာပါ။ ဒီနေ့ပွဲမှာ လက်စတာရဲ့ပထမဂိုးအတွက် လုံးလုံးလျားလျားအပြစ်ရှိသူက ဖရက်ဒ်ဖြစ်တယ်။ အီယန်နာချိုရဲ့ ပွဲသိမ်းဂိုးမှာလည်း ယူနိုက်တက်ခံစစ်အစုအဖွဲ့တခုလုံးရဲ့ မတည်ငြိမ်မှုအပြစ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကပျော့ကွက်စစ်စစ်ဖြစ်နေပါတယ်။ တိုင်လီမန်းစ်ရဲ့ သွင်းဂိုးကိုကြည့်ရင် ကွင်းလယ်ခံစစ်ပိုင်းရော၊ ခံစစ်ကြောင်းကပါ သူ့ကိုဖိအားပေးမယ့်သူမရှိဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကန်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့တာကို မြင်ရတယ်။ ဒီလိုခံယူချက်က ယူနိုက်တက်ရဲ့ သေကွင်းသေကွက်ပဲလို့ အတပ်ပြောရမှာပါ။
ဆုဖလားအောင်မြင်မှုကို နမ်းရှိုက်ချင်တဲ့ နည်းပြနှစ်ဦးရဲ့သတ်ပွဲ
ယူနိုက်တက် နဲ့ လက်စတာအသင်းကို အချိန်တူနီးပါးအတွင်းမှာ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ဆိုးလ်ရှားနဲ့ ရော့ဂျားစ်တို့ရဲ့ ဒီနေ့သတ်ပွဲဟာ အသင်းနည်းပြဘဝမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဆုဖလားအောင်မြင်မှုကို ရှာဖွေနမ်းရှိုက်ချင်ခဲ့တာချင်းလည်း တူညီနေပါတယ်။ FA ဖလားကို နှစ်ဦးစလုံးက ရည်မှန်းထားကြတယ်။ ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သူက ဆိုးလ်ရှားကို ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ ရော့ဂျားစ်ဖြစ်လာတယ်။ FA ဆီမီးအဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး စိန့်အသင်းနဲ့ တွေ့ဆုံရပါမယ်။ ဆိုးလ်ရှားကတော့ ယူရိုပါလိဂ်ကို ပြန်လည်အာရုံစိုက်ရတော့မှာပါ။
အဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကို စတေးလိုက်ရတဲ့ ယူနိုက်တက်
ယူနိုက်တက်ရဲ့ နောက်ဆုံး အဝေးကွင်းရှုံးပွဲက လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်က လီဗာပူးလ်ကို အန်ဖီးလ်မှာ ၂ ဂိုးပြတ်နဲ့ အရေးနိမ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ၂၉ ပွဲဆက် အဝေးကွင်း ရှုံးပွဲမရှိ စံချိန်ယူထားတဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အဝေးကွင်းမှတ်တမ်းကောင်းက လက်စတာရဲ့ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတယ်။ လက်စတာအသင်းကလည်း ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ပွဲကို ရယူသွားခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်။
နံပါတ် ၁ ဂိုးသမားနေရာနဲ့ ဟန်ဒါဆန်ထိုက်တန်ရဲ့လား?
ဟန်ဒါဆန်လား? ဒဟဲယား? ဒါက ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အတော်လေးဆူညံလာတဲ့ အငြင်းပွားမှုပါ။ ဟန်ဒါဆန်က ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ မန်စီးတီး ဝက်စ်ဟမ်းတို့ကို ဂိုးမပေးခဲ့ရဘဲ Clean Sheet ယူနိင်ခဲ့တယ်။ အေစီမီလန်နဲ့ ပအကျော့မှာတော့ လက်စွမ်းပျက်နေခဲ့တာမြင်ရတယ်။ အမှားအယွင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်။
အေစီမီလန်နဲ့ ဒုအကျော့မှာ လက်စွမ်းပြခဲ့လို့ ဟန်ဒါဆန်တယောက် ပြန်လည်တည်ငြိမ်ပြီလို့ ယူဆနေကြချိန်မှာ ဒီနေ့ပွဲရဲ့ အားနည်းတဲ့ လက်စွမ်းတွေကို ထပ်မံမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သူ့အပေါ်မှာ လွန်လွန်ကျူးကျူးဝေဖန်တာမျိုးတွေတော့ မရှိသေးပေမယ့် ယူနိုက်တက်ဂိုးပေါက်ကို ကာကွယ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ရင့်ကျက်မှု၊ တည်ငြိမ်မှု မရှိသေးဘူးလို့ မှတ်ချက်ချနေကြပါပြီ။
ယူနိုက်တက်ချေပဂိုးမှာ ဗန်ဒဘိခ်ရဲ့အရည်အသွေးကို မြင်ခဲ့ရ
ဂရင်းဝုဒ်ရဲ့ ချေပဂိုးမှာ ယူနိုက်တက်က ပထမပိုင်းအတွင်း အသက်ရှုချောင်သွားခဲ့ရပြီး ဒီဂိုးမှာ ဗန်ဒဘိခ်ရဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်းအရည်အသွေးကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်တွေ့ခဲ့ရတာက သူနဲ့ယူနိုက်တက်အနာဂတ်မှာ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ခဲ့တာပါ။ သူက ဂရင်းဝုဒ်ကန်သွင်းရလွယ်ကူအောင် နေရာလွတ်ကို ဖန်တီးပေးသွားခဲ့တယ်။ သူ့ရွေ့လျားမှုက လှပခဲ့တယ်။